Tag: Ecwid | Martech Zone
Garaaca Wadnaha: Kordhinta Is-beddelka 10% oo leh Caddeyn Bulsho
Monday, July 13, 2020 Khamiis, Maarso 4, 2021 Douglas Karr
Websaydhyada ku daraya boodhadhka caddaynta bulshada ee tooska ah waxay sare u qaadaan sicirka beddelaaddooda iyo kalsoonidooda. Pulse waxay u saamaxdaa ganacsiyada inay muujiyaan ogeysiisyada dadka dhabta ah ee wax ka qabanaya boggooda. In kabadan 20,000 oo boggag ah ayaa adeegsada Pulse oo hela celcelis beddelid ah 10%. Goobta iyo muddada ogeysiisyada si buuxda ayaa loo habeyn karaa oo, inta ay soo jiitaan dareenka booqdaha, kama jeediyaan feejignaanta ujeedka booqdaha uu u joogo. Waa qurux
TaxJar waxay soo bandhigtaa Emmet: Canshuuraha Iibinta Cilmiga Farsamada
Mid ka mid ah caqabadaha ugu qosolka badan e-commerce maalmahan ayaa ah in dowlad kasta oo maxalli ah ay rabto inay ku boodo oo ay sheegto canshuurta iibkeeda si ay dakhli badan ugu soo saarto gobolkooda. Laga bilaabo maanta, waxaa jira in kabadan 14,000 xukumooyin canshuur bixin ah gudaha Mareykanka oo leh qaybaha canshuurta wax soo saarka 3,000. Celcelis ahaan qofka iibiya dharka khadka tooska ah ee internetka ma oga in dhogorta ay ku darsadeen badeecada ay hadda u kala saarayaan dharkooda si ka duwan sidii hore oo ay iibsashadaas u sameynayaan
Privy: Waa fududahay in la istcimaalo, Astaamaha Awooda leh ee La Wareegista Macaamiisha Goobta
Talaado, Juun 25, 2019 Arbacada, December 23, 2020 Douglas Karr
Mid ka mid ah macaamiisheennu wuxuu ku jiraa Squarespace, oo ah nidaam maareyn maareyn oo bixiya dhammaan aasaasiga - oo ay ku jiraan ecommerce. Macaamiisha iskaa wax u qabso ah, waa madal aad ufiican oo xulashooyin badan leh. Waxaan inta badan kugula talineynaa marti gelinta WordPress sababtoo ah awooddeeda aan xadidneyn iyo dabacsanaanta… laakiin qaar ka mid ah Squarespace waa xulasho adag. In kasta oo Squarespace ka maqan tahay API-ga iyo malaayiin isku dhafan oo wax soo saar leh oo diyaar u ah inay socdaan, haddana waxaad weli ka heli kartaa qaar ka mid ah aaladaha cajiibka ah ee lagu hagaajinayo bartaada. Anaga
Tafaftiraha: Maareynta Suuqgeynta La Xiriira La Xiriira
Arbacada, Nofeembar 19, 2014 Khamiis, Juun 23, 2015 Douglas Karr
Lacag ka sameynta waxyaabaha ku jira daabacaadda sida Martech waxay u baahan tahay xoogaa dadaal ah. Waxaan u adeegsanaa dhowr habab oo kala duwan, oo ay ku jiraan xayeysiinta lacagta lagu bixiyo ee shabakadeena xayeysiiska, iyada oo loo marayo Google Adsense, iyada oo loo marayo iskaashiyo iyo maalgelinno - iyo waliba iyada oo loo marayo suuqgeynta ku xiran. Waa maxay Suuq geyn shirkad? Suuqgeynta gacansaarka ahi waa nooc ka mid ah suuqgeynta waxqabadka ku saleysan taas oo ganacsigu ku abaalmariyo mid ama in ka badan la-hawlgalayaal soo booqde kasta ama macmiil ah oo ay keeneen dadaalka suuqgeynta u gaarka ah. Sidee